Workshop on tourism development plan in Bangan for cultural heritage sites
by MO HT | Feb 15, 2018 | News |0Comments
Workshop on tourism development plan in Bangan for cultural heritage sites was conducted on the morning of February 15 at Horizon Lake View Hotel , Nay Pyi Taw. Permanent Secretary of Ministry of Hotels and Tourism , U Yee Mon , officials from the ministry, delegates...
ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားဧည့်သည်များ ၄င်းတို့ ၏ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ဆိုင်ကယ်ဖြင့် နယ်စပ်ဝင်ပေါက်များမှတဆင့် လာရောက် လည်ပတ်လျက်ရှိ
by MO HT | Feb 14, 2018 | News |0Comments
နေပြည်တော်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၁၄) ရက် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ကြီးကြပ်မှု ၊ Expeclition Myanmar Tour Co., Ltd ၏ စီစဉ်မှုဖြင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံသားဧည့်သည် (၅) ဦးသည် (၂၈-၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ၄င်းတို့၏ ကိုယ်ပိုင် မော်တော်ဆိုင်ကယ် (၅) စီးဖြင့် မြ၀တီနယ်စပ်ဂိတ်မှ တဆင့်...
နေပြည်တော် ၊ ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄) စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းမြို့ရှိ စစ်ကိုင်းဟိုတယ်ခန်းမ၌ (၁၁.၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် စစ်ကိုင်းမြို့အတွင်းရှိ လိုင်စင်ရဟိုတယ်နှင့်တည်းခိုရိပ်သာများမှ လုပ်ငန်းရှင်များ စုပေါင်း၍ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊...
Nay Pyi Taw, 13rd February With the supervision of Ministry of Hotels and Tourism and the arrangement of Tint Tint Myanmar Group of Companies and Star Cruise International Cruise Company based in Hong Kong, Super Star Libra International Cruise containing 409...
Holding ASEAN- Korea Tourism Capacity Building Workshop
Nay Pyi Taw, 13th February With the supervision of Ministry of Hotels and Tourism and ASEAN- Korea Center, ASEAN- Korea Tourism Capacity Building workshop was held with the title of "Promoting Bagan asaSustainable Cultural Heritage Tourism Destination" at Aye Yar...
Preparing to celebrate Tourism and Investment Festival in Kawthaung
by MO HT | Feb 11, 2018 | News |0Comments
Yangon, February (11) Union Minister for Ministry of Hotels and Tourism , U Ohn Maung met with responsible persons from Abercrombie & Kent Travel and Tours in Inya Lake Hotel in Yangon at9AM in February, 10, 2018 and discussed about luxury cruise tours which...